Mashiinka dahaadhidda abuur Warshada - Mashiinka dahaadhida shiinaha Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha
5BY-5A Mishiinka dahaadhida shinnida/Mashiinka daweynta abuurka ee qamadiga barley
Mashiinka dahaarka shinnida ee 5BY-5A waxa inta badan loo isticmaalaa habaynta abuurka. Waxay leedahay codsi ballaadhan oo lagu dahaadho abuurka dalagyada kala duwan, sida iniinaha sarreenka, shaciir, galley, hadhuudh, digir, suuf, khudaar, miro iyo wixii la mid ah. Abuurka waxaa lagu dahaadhi doonaa daawo dareere ah ka hor beerashada, si loola tacaalo cudurrada kala duwan iyo biqilka wanaagsan.
5BY-5B Mishiinka Dahaadhida Shinnida/Mashiinka daweynta abuurka ee shaciga badarka ah
5BY-5B Mishiinka Dahaarka Shinnida waxa inta badan loo isticmaalaa habaynta abuur. Waxay leedahay codsi ballaaran oo miraha dalagyada kala duwan, sida sarreen, shaciir, galley, haruur, soybean, suuf, khudaar, miro iyo wixii la mid ah.
5BY-10B Mishiinka Dahaarka Shinnida /Mashiinka daweynta abuurka ee digirta galleyda
5BY-10B Mishiinka Dahaarka Shinnida waxa inta badan loo isticmaalaa habaynta abuur. Waxay leedahay codsi ballaadhan oo lagu dahaadho abuurka dalagyada kala duwan, sida iniinaha sarreenka, shaciir, galley, hadhuudh, soybean, suuf, iniin khudradeed, iniin miro iyo wixii la mid ah.
Seeraha iyo wakiilka dahaarka iniinta ayaa si isku mid ah isku qasan iyadoo loo eegayo saamiga la qoray oo waxay sameeyaan filim daahan oogada sare ee miraha. Waxay wanaajisaa ka-hortagga cudurka iniinaha iyo saamaynta cayayaanka ka dib marka la beero. Mashiinka dahaarka abuur nooca Dufcaddii waa model muhiim u ah habaynta abuur iyo wax soo saarka.